म शिशा पुछ्दिनँ ४
गएको हप्ता त हो नी छोरीले आफ्नी आमा (ममी) को मोबाइल फोनमा ‘मिस्ड कल’ गरेको, अनि मेरी दुलहीले छोरीलाई फोन गरेको । आमा–छोरीको मोबाइल वार्ता सुन्दै गर्दा बोलीरहेका दुईजनामा मैले प्रशन्नताको स्पष्ट भाव पाएथेँ, तर मलाई अलि धेरै गम्भीर बनाईदिए मेरा दुई परीहरुले !
“के गर्दैहुनुहुन्छ नी ?” हामीले यताबाट “छोरी” भनेपछि उताबाट छोरीले बोल्ने पहिलो वाक्य नै यहि हो ! त्योदिन पनि छोरीले उनकी आमाले “छोरी” सम्बोधन गरेलगत्तै यहि प्रश्न गरीन् ।
“तिमीसँग कुरा गर्दैछु ।” वा “भर्खर खाजा खाएँ ।” भनेको भएपनि आज म यसरी सायदै यो लेखिरहेको हुनेथिएँ । तर मेरी पत्नीले भनीन – “म भर्खर पढेर आएको, बाबाले खाजा बनाउनु भयो अनि हामीले खायौं !” यसो भनेर सकेपछि उनले पुलुक्क मतिर फर्केर हेरीन् । उनको त्यो हेराईमा मैले असीम अनुग्रहीत भाव पाएथेँ ।
उनीहरु अरु धेरै कुराहरु गर्दै थिए, मलाई चाँहि पत्नीले बोलेको पहिलो वाक्यले नै एक हिसाबले स्तब्ध बनायो । अझ यस्तो भनूँ कि त्यसले मेरो भावुक हृदयलाई क्षतविक्षत पार्‍यो । उनको तात्कालिक अनुग्रहीत भावले मेरो हृदयमा ल्याएर आएको कम्पनको अहिले म वर्णन गर्न सक्दिनँ ।
प्रायःजसो म कामबाट साढे दुईबजेतिर घर फर्किसकेको हुन्छु । उनी फर्किदा साढे तीनमा केही बढी हुन्छ । र त्यो दिन पनि त्यस्तै भएथ्यो ।
मलाई झट्ट याद भो’ – उनी आउँदा मैले चिया तयार पारेर राखेको थिएँ । बिस्कुट त छदैं थियो । हामीले त्यो दिन खाएको खाजा त्यही चिया बिस्कुट थियो । मैले दुई मिनेट पनि नलगाई उमालेको चिया मेरो पत्नीको लागि “खाजा” भयो । साँच्ची, हाम्रा नेपाली नारीहरु आफ्ना श्रीमान्का स–साना कामप्रति पनि कति धेरै अनुग्रहीत हुन सकेका ? बच्चै हुँदा बुबाले उमालेको चाउचाउलाई आमाले भन्नुहुन्थ्यो – “ल बुबाले बनाएको “अर्नी” खाना आओ बाबुहरु !” आमाले यसो भन्दै गर्दा उहाँको मुहारमा पनि म असीम कृतज्ञता देख्थेँ । मामाघरमा जाँदा पनि माईजुले उस्तै प्रेमभाव सहित भन्नुहुन्थ्यो – “ल भान्जा, मामाले बनाएको ‘घिन्ती’ र चिउरा खाऊ !”
वर्षका ३६५ दिन मध्ये मैले मेरी पत्नीलाई पाँच दिन खाजा बनाएर सघाउँछु होला । तर बाँकी दिनहरुमा त उनले नै हो सबथोक बनाउने हाम्रा लागि । तर म कहिल्यै अनुग्रहीत भइँन ! सायद खाना खाजा बनाएर खुवाउनुपर्ने उनको जिम्मेवारी हो भन्ने ठानेँ मैले । र, त्यसरी खान पाउनुपर्ने मेरो हक ! मनमा अनेकन तर्कनाहरु खेल्न थाले ।
महिला अधिकार, महिला पुरुष समानताका आदर्शका कुराहरुमा मैले धेरै पटक लेख्दै र बोल्दै आए । मैले मात्र नभै धेरै पुरुषले त्यसो गर्छौ नै ! तथापि यी लेखेर र बोलेर मात्र प्राप्यसाध्य छैनन भन्ने हामीले कहिल्यै बोध गरेनौं । ‘म’ यस्तो पुरुष भएछु कि गफका गुड्डी हाँक्ने तर सिन्को नभाँच्ने !
अस्तिमात्रै काममा म शिशा पुछ्दै थिएँ, आफैले टल्काएको शिशाबाट सडकमा मैले एउटा लक्का जवान ठिटो देखेँ । उसले बच्चाको झोलुंगो (बच्चा राखेर गुडाउने भाँडो) गुडाउदँै थियो । ऊ बच्चा लिएर मैले काम गर्ने किनमेल केन्द्रभित्र छिर्‍यो । म अर्कोतिरको शिशा पुछ्न कुदेँ, ऊ त्यतैतिरको एउटा बच्चाको सामान पाइने पसलभित्र छिर्‍यो । तत्क्षणः मैले सम्झेँ यदि कुनै नेपाली पुरुष एक डेढ बर्षे बच्चा लिएर बच्चाका लागि केही सामान किन्न पसलमा गयो भने, पसलेले सामान दिनुभन्दा पहिले प्रश्न अवश्य सोध्नेछ – “श्रीमती ख्वै र ? आफै आउनुभएको ?”
हालैको दिन मैले एउटा राष्ट्रिय साप्ताहिकमा कामकाजी महिलाको बारे लेखिएको आलेख पढेको थिएँ । आलेखमा थुप्रै महिलाहरुले नेपाली समाजको “पुरुष अहमता” र “सामन्तवादी चिन्तन” को निकै नै घिनलाग्दो अनुभवहरु बाडेका छन । श्रीमान् श्रीमती दुवै काम गर्छन । श्रीमतीले काममा जानुपहिले चिया तयार पार्ने देखि खाना बनाउने ख्वाउने खाने र छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउनेसम्मका तारताम्य मिलाउँछिन । काम सकिएपछि दुवै घर फर्किन्छन् । खाजा बनाउँछिन, छोराछोरी श्रीमानलाई ख्वाउने काम गर्छिन । उनीहरुलाई गृहकार्य गर्न सघाउँछिन । तर पुरुष पात्र आराम मात्र गरिरहन्छ । मनोरन्जन लिन्छ – टिभी हेरेर । इन्टरनेटमा सर्फिङ गरेर । आलेखमा भनेजस्तै वास्तविकता के हो भने नेपाली महिलाहरुका लागि आराम भनेको रातीको छ सात घण्टा सुत्ने समय मात्र हो ।
मानवशास्त्रीहरु भन्छन् – ढुंगे युगमा पुरुषहरु शिकार खेल्न जान्थे, महिलाहरु घरमा बसेर बच्चाबच्चीको स्याहारमा लाग्थे । त्यहाँबाट शुरुभएको पुरुष दासता आज पर्यन्त निरन्तर छ । पुरुष पात्रको यस हैकमवादी चरित्रकै कारण दुवै पात्रहरुको यथोचित विकासमा व्यवधान आएको कटु यथार्थ हो । अब बिलम्ब नगरी नेपाली समाजलाई ढुंगे युगबाट माथी उठाउनु पर्ने बेला भएको छ ।
त्यो दिन आओस्, श्रीमानहरुले खाजा बनाउँदा श्रीमतीहरुलाई अनौठो नलागोस् । सबैकाम सँगसँगै गर्ने समय आओस् । कामहरुमा लैङ्गीक विभाजन नहोस् । आउँदो पुस्ताले यस्तो पढ्न पाउन – कुनै समय कामहरु दुई प्रकारका हुन्थे । केही पुरुषहरुले गर्थे, धेरै कामहरु महिलाहरुले गर्थे !